Open Sesame2- အလီဘာဘာ - Myanmar Online Game
Open Sesame2– သင်ဒီနေ့ရွှေသေတ္တာတူးဖော်ပြီးပြီလား? ဖရီးအကြိမ် 250 အထိရနိုင်တဲ့စလော့ဂိမ်း ! ပျော်ရွှင်မှု 100% ပေးနိုင်တဲ့စလော့ဂိမ်း!
အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူး ဒီနေ့အွန်လိုင်းကာစီနိုဝါသနာပါသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Open Sesame2ဂိမ်းလေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သင်ကတော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ် ဘာကြောင့် Open Sesame 1 ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ2ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကာစီနိုစဆော့တဲ့အချိန်မှာ Open Sesame2လည်းစထွက်နေပါပြီ။ နောက်ပြီးဆော့ရတာလည်း တော်တော်လေးဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုဆော့လို့ကောင်းလဲသိချင်ရင်တော့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့။
Open Sesame2က 1 ထက်တစ်ခုပိုလာတာကတော့ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲက လျို့ဝှက်ရတနာသေတ္တာလေးတစ်ခုပိုလာခြင်းပါ။
လျို့ဝှက်ရတနာသေတ္တာကရတဲ့အမှတ်ကို Coin In နှင့်မြှောက်တာဖြစ်ပြီး အဲ့သေတ္တာလေးက သုံးလိုင်းမြောက်မှာပဲ ကျတတ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဘာကြောင့် Open Sesame2ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်တယ်။
အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ အဲ့မှာ Free Spin ပုံစံ3ခုရလည်း Free Game ဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း ရှေ့နှစ်ကြောင်းမှာ Free Spin2ခုနှင့် တတိယတစ်ကြောင်းမှာ လျို့ဝှက်သေတ္တာလေးဝင်လာရင်လည်း Free Game ကိုရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Open Sesame2ကတခြားဂိမ်းတွေထက် Free Game ရဖို့အခွင့်အရေးပိုများတယ်ပြောရမယ်။
Free Game ဝင်တာနဲ့တပြိုင်နက် ကျွန်တော်တို့ကကံစမ်းမဲနှိုက်ရပါမယ်
1. ဘယ်အဆနဲ့မြှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ Free Game ရဲ့အဆကိုမဲနှိုက်ရပါတယ် (2-6 ဆအထိ)
2. Free Game ဆော့ခွင့်ရမယ့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုလည်းမဲနှိုက်ရပါတယ် (5-15 ကြိမ်အထိ)
3. အကယ်၍သင်ရတဲ့ Free Game က Free Spin3ခုနှင့်ရတာမဟုတ်ဘဲ Free Spin2ခုနှင့် လျို့ဝှက်သေတ္တာ 1 ခုပါလာပါက နောက်ထပ် 1-5 ဆ (သို့) 2-10 အကြိမ်ရေကိုထပ်ပြီးမဲနှိုက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် (ဒီ နံပါတ်3အချက်က Free Spin ထဲမှာလျို့ဝှက်သေတ္တာပါလာမှရမှာဖြစ်ပါတယ်)
ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းဆော့တိုင်3းမိနစ်အတွင်း Free Game အမြဲကျတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း Free Game အကြိမ်ရေများတိုင်း အမှတ်အများကြီးထွက်မယ်လို့တော့ အာမခံမခံနိုင်ပါဘူး။
တစ်ခါက ကျွန်တော်ဖရီးဂိမ်း9ကြိမ်လှည့်ခွင့်ရပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲ့9ကြိမ်မှာမှ တစ်ကြိမ်မှာပဲအမှတ်ပေးပါတယ် သေလိုက်ပါတော့ကွာ….ဒါကဖရီးဂိမ်းပဲလေ ဘာကြောင့်အဲ့လောက်တောင်ကပ်စေးနည်းရတာလဲ စဉ်းစားလို့မရဘူး။
ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြရအောင် …
အကယ်၍သင်က Free Game ကျတဲ့ရင်ခုန်မှုကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Open Sesame2ကသင်နဲ့အရမ်းကိုသင့်တော်ပါတယ်။
နောက်ပြီးဒီဂိမ်းက ဖရီးဂိမ်းဝင်တာလွယ်တာကြောင့် ဖရီးဂိမ်းထဲမှာ ဖရီးဂိမ်းပြန်ဝင်ဖို့လည်းမခက်ခဲပါဘူး ဒါကြောင့်ဖရီးဂိမ်း 250 အထိတောင်ရနိုင်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖရီးဂိမ်း 42 ကြိမ်အထိပဲအများဆုံးဝင်ဖူးသေးတယ်။ 250 ထိဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ….
မှတ်ချက် : စလော့ဂိမ်းဝါသနာပါသူတစ်ယောက်အနေနှင့်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားသူများစမ်းကစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Game Website : JDBYG
လျော်နှုန်း : ★★★★☆
ဂိမ်း၏ဆွဲဆောင်နှုန်း : ★★★★☆
ဆော့ကောင်းနှုန်း : ★★★☆
လျော်ဆ : ★★★
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖရီးဂိမ်းအရမ်းများတာလည်း အရမ်းကောင်းတယ်လို့တော့မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။ ဖရီးဂိမ်းများပြီးအမှတ်မထွက်ရင်လည်း စိတ်ရှုပ်မိတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်မိပါတယ်။ အမှတ်ထွက်ခြင်း မထွက်ခြင်းကလည်းကံနဲ့ဆိုင်လို့ တစ်ချို့ဆိုရင်လည်းဖရီးဂိမ်းနဲ့ အများကြီးနိုင်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ ဂိမ်းထဲက effect တွေကို update လုပ်ပေးရင်ပိုဆော့လို့ကောင်းမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။